Shanghai Tourism Festival 2020 တရုတ် နိုင်ငံ ရှန်ဟိုင်း မြို့က ပွဲတော် ကြီးများ ကျင်းပ နေခြင်း ( သို့ ) တရုတ် မှာ ကာကွယ်​ဆေး ရှိ​နေပြီး သားလား..? – Shwe Ba
Shanghai Tourism Festival 2020 တရုတ် နိုင်ငံ ရှန်ဟိုင်း မြို့က ပွဲတော် ကြီးများ ကျင်းပ နေခြင်း ( သို့ ) တရုတ် မှာ ကာကွယ်​ဆေး ရှိ​နေပြီး သားလား..?
Shwe MM | September 16, 2020 | International News | No Comments
တရုတ်ပြည် က အထင်ကရ အကြီးဆုံးမြို့ကြီး တစ်မြို့ဖြစ် တဲ့ ရှန်ဟိုင်းမြို့ ဟာ သူ့ရဲ့ ခရီးသွားကဏ္ဍ ကို ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ပြီး ပွဲ​တော်​တွေကျင်းပေ နပါပြီ…ကိုဗစ်မရှိ​တော့သည့် အလား ပျားပန်းခတ် ထူထပ်လှတဲ့ လူအုပ်ကြီး​တွေ ​ရွေ့လျားသွားလာ​ဈေး ဝယ်ကာ ​ပျော်မြူး​နေကြတာ ကို တရုတ် မီဒီယာ​တွေမှာ ​ဝေ​​ဝေဆာဆာ ​ဖော်ပြ​နေတာ ကိုလည်း ​တွေ့ရပါတယ်.သွားလာ​နေကြ တဲ့ လူ​တွေ ရဲ့ ၉၀ % ဟာ နှာ​ခေါင်းစည်း တပ်ဆင်ထားကြခြင်း မရှိကြပဲ အထူး သဖြင့် တရုတ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာ နှာ​​ခေါင်းစည်း လုံးဝ တပ်ဆင် မထားကြတာကို သတိပြုဖွယ်​တွေ့မြင်ရ ပါတယ်…
ရှန် ဟိုင်း မှာ လက် ရှိ COVID-19 လူနာ (၄၁)ဦးရှိပြီး အားလုံးဟာ ပြင်ပမှ ကူးစက်လာသူများ (imported cases) သာဖြစ်ပြီး အများစု ဟာ ဖိလစ်ပိုင် လူမျိုး များ ဖြစ်ကြပါတယ်. ပြည်တွင်းကူးစက်မှု လုံးဝမရှိ​တော့ပဲ လက်ရှိ ကူးစက်ခံ​နေတဲ့ အထဲမှာလည်း တရုတ်နိုင်ငံသားများ မပါဝင်ပါဘူး…ပြည်မ တစ်ခုလုံး မှာလည်း ကိုဗစ်လူနာသစ် ၈ ဦးသာ အသစ်ရှိပြီး အသစ် များအားလုံး ပြင်ပမှကူးစက်လာသူများသာဖြစ်ကြပါတယ်.
တရုတ် နိုင်ငံ သား အားလုံး နီးပါးဟာ COVID-19 ကပ်​ရောဂါကို လုံးဝ​ကြောက်ရွံ့စရာ မလို​တော့သည့် ပုံစံကို ​တွေ့မြင်​နေရပြီး, ဒါဟာ တရုတ် နိုင်ငံ သားတိုင်းကို COVID-19 ကာကွယ်​ဆေး ထိုးနှံပြီးသားဖြစ်နိုင်တယ် လို့ 90% ယုံကြည်ဖွယ်ရာ ရှိပါတယ်.သို့ရာ တွင် တရုတ်ပြည် အစိုးရ ကို ဆန့်ကျင်​နေတဲ့ ​ဟောင်​ကောင်ကျွန်းက​တော့ လက်ရှိ အချိန်အထိ ပိုးတွေ့ရှိမှုရပ်တန့်သွားခြင်း မရှိပဲ တရုတ် နိုင်ငံ မှာ COVID-19 case အများဆုံး​ဒေသတစ်ခု အဖြစ် ဆက်ရှိ​နေ ဆဲဖြစ် ပါတယ်.
ဒါဟာ သူ့ကို ပုန်ကန် တဲ့​ဒေသမို့ ဒဏ်ခတ်ပြီး ဆန္ဒပြမှု​တွေ ငြိမ်သက်​နေ​အောင် ထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြစ်နိုင်ပြီး Bio weapon များကို New World’s Order Weapon အ​နေနဲ့တကယ်ပဲ အသုံးချလာပြီးလားဆိုတာ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ တစ်ခုအ​နေ နဲ့ ​တွေး​ဆ​စရာ ဖြစ်လာ​နေ ပါပြီ…ပြည်နယ် (၃၄)ခု ရှိတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ မှာ ပြည်နယ် ( ၁၉ ) ခု မှာ ​ရောဂါကူးစက်ခံရသူများရှိ​နေဆဲဖြစ်ပြီး ပြည်မမှာ​တော့ ပြင်ပကူးစက်မှုသာရှိပြီး ​​COVID 19 ရောဂါ​ကြောင့် သေဆုံးမှု မရှိတာ လ​ပေါင်းများစွာကြာနေပြီမို့ တရုတ်နိုင်ငံ ဟာ ကာကွယ်​ဆေးတင် မဟုတ်ပဲ ကုသ​ဆေးပါ ထုတ်လုပ် အသုံးပြုနိုင်​နေပြီလား လို့ ​တွေး​တောဖွယ်ရာလည်း ဖြစ်ေ နပါတယ်….
Yan Myo Naing
တရုတျပွညျ က အထငျကရ အကွီးဆုံးမွို့ကွီး တဈမွို့ဖွဈ တဲ့ ရှနျဟိုငျးမွို့ ဟာ သူ့ရဲ့ ခရီးသှားကဏ်ဍ ကို ပွနျလညျ ဖှငျ့လှဈပွီး ပှဲ​တျော​တှကေငျြးပေ နပါပွီ…ကိုဗဈမရှိ​တော့သညျ့ အလား ပြားပနျးခတျ ထူထပျလှတဲ့ လူအုပျကွီး​တှေ ​ရှလြေ့ားသှားလာ​စြေး ဝယျကာ ​ပြျောမွူး​နကွေတာ ကို တရုတျ မီဒီယာ​တှမှော ​ဝေ​​ဝဆောဆာ ​ဖျောပွ​နတော ကိုလညျး ​တှရေ့ပါတယျ.သှားလာ​နကွေ တဲ့ လူ​တှေ ရဲ့ ၉၀ % ဟာ နှာ​ခေါငျးစညျး တပျဆငျထားကွခွငျး မရှိကွပဲ အထူး သဖွငျ့ တရုတျ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားဟာ နှာ​​ခေါငျးစညျး လုံးဝ တပျဆငျ မထားကွတာကို သတိပွုဖှယျ​တှမွေ့ငျရ ပါတယျ…
ရှနျ ဟိုငျး မှာ လကျ ရှိ COVID-19 လူနာ (၄၁)ဦးရှိပွီး အားလုံးဟာ ပွငျပမှ ကူးစကျလာသူမြား (imported cases) သာဖွဈပွီး အမြားစု ဟာ ဖိလဈျပိုငျ လူမြိုး မြား ဖွဈကွပါတယျ. ပွညျတှငျးကူးစကျမှု လုံးဝမရှိ​တော့ပဲ လကျရှိ ကူးစကျခံ​နတေဲ့ အထဲမှာလညျး တရုတျနိုငျငံသားမြား မပါဝငျပါဘူး…ပွညျမ တဈခုလုံး မှာလညျး ကိုဗဈလူနာသဈ ၈ ဦးသာ အသဈရှိပွီး အသဈ မြားအားလုံး ပွငျပမှကူးစကျလာသူမြားသာဖွဈကွပါတယျ.
တရုတျ နိုငျငံ သား အားလုံး နီးပါးဟာ COVID-19 ကပျ​ရောဂါကို လုံးဝ​ကွောကျရှံ့စရာ မလို​တော့သညျ့ ပုံစံကို ​တှမွေ့ငျ​နရေပွီး, ဒါဟာ တရုတျ နိုငျငံ သားတိုငျးကို COVID-19 ကာကှယျ​ဆေး ထိုးနှံပွီးသားဖွဈနိုငျတယျ လို့ 90% ယုံကွညျဖှယျရာ ရှိပါတယျ.သို့ရာ တှငျ တရုတျပွညျ အစိုးရ ကို ဆနျ့ကငျြ​နတေဲ့ ​ဟောငျ​ကောငျကြှနျးက​တော့ လကျရှိ အခြိနျအထိ ပိုးတှရှေိ့မှုရပျတနျ့သှားခွငျး မရှိပဲ တရုတျ နိုငျငံ မှာ COVID-19 case အမြားဆုံး​ဒသေတဈခု အဖွဈ ဆကျရှိ​နေ ဆဲဖွဈ ပါတယျ.
ဒါဟာ သူ့ကို ပုနျကနျ တဲ့​ဒသေမို့ ဒဏျခတျပွီး ဆန်ဒပွမှု​တှေ ငွိမျသကျ​နေ​အောငျ ထိနျးခြုပျထားခွငျးဖွဈနိုငျပွီး Bio weapon မြားကို New World’s Order Weapon အ​နနေဲ့တကယျပဲ အသုံးခလြာပွီးလားဆိုတာ စိုးရိမျဖှယျရာ တဈခုအ​နေ နဲ့ ​တှေး​ဆ​စရာ ဖွဈလာ​နေ ပါပွီ…ပွညျနယျ (၃၄)ခု ရှိတဲ့ တရုတျနိုငျငံ မှာ ပွညျနယျ ( ၁၉ ) ခု မှာ ​ရောဂါကူးစကျခံရသူမြားရှိ​နဆေဲဖွဈပွီး ပွညျမမှာ​တော့ ပွငျပကူးစကျမှုသာရှိပွီး ​​COVID 19 ရောဂါ​ကွောငျ့ သဆေုံးမှု မရှိတာ လ​ပေါငျးမြားစှာကွာနပွေီမို့ တရုတျနိုငျငံ ဟာ ကာကှယျ​ဆေးတငျ မဟုတျပဲ ကုသ​ဆေးပါ ထုတျလုပျ အသုံးပွုနိုငျ​နပွေီလား လို့ ​တှေး​တောဖှယျရာလညျး ဖွဈေ နပါတယျ….
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့WHOက ရုရှားထုတ် Covid 19 ကာကွယ်ဆေးကို သုံးသပ်လိုသေးကြောင်း ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားလိုက်
သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုအရှိန် မြင့်တက်မှုကြောင့် ဥရောပ ခရီးသွားများအားလုံးကို ရက် (၃၀) ကြာ ပိတ်ပင်
သမ္မတထရမ့်နှင့် အမေရိကန် ရောဂါ ထိန်းချုပ် ကာကွယ်ရေးစင်တာတို့ကြားတွင် သဘောထား ကွဲလွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်
ထိုမ်ဝမ် အနီး စစ်ရေး လေ့ကျင့် မှုသည် အချုပ် အခြာ အာဏာ ကို ကာကွယ် ရန် လိုအပ် ၍ လေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ် ဟု တရုတ် ဆို
အိစိကွေးကတော့ သူရဲ့ ဖေ့ဘွတ်ခ် အကောင့်မှာ သူငယ်ချင်းဖြစ်နေ သူတွေ ထံကနေ ငွေ(၁၀၀၀)ကျပ်စီအလှူခံ လိုက်ပါပြီ
သင်္ကန်းကျွန်း စံပြ ဆေးရုံ က ထွက်ပြေး တဲ့ ကိုဗစ် လူနာ မိန်းကလေး ကို ပုလဲ မီးသတ် တပ်ဖွဲ့မှ သွားရောက် ခေါ် ဆောင် လာ ( ရုပ်သံပါ )
မိန်းက လေး တိုင်း အား ကျ ရ လောက် မယ့် သူမ ရဲ့ အရောင် အသွေး စုံစုံ အင်္ကျီ လဲ ခန်းကြီး ကို ပြ သလာ တဲ့ ဖြူဖြူထွေး
တရုတ် နိုင်ငံ ၌ ” BRUCELLOSIS” ဟုအမည်ရ သော လူ့မျိုးပွားမှု စနစ် ကို ထိခိုက်ပြီး လူသေစေနိုင်သည့် ဗိုင်းရပ်စ် သစ်တစ်မျိုး ထွက်ပေါ်ကူးစက်နေ
နှင်းဆီ အဖွဲ့သားတွေရဲ့ အငြိမ့်ပြက်လုံး လေးတွေကို ပြန်လည် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ကိုပေါက်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်
ထိုင်း ပြည်သူတွေ သဘောထား ကို လေးအနက် ထားပြီး ထိုင်း အစိုးရ တရုတ် ကြွေးမြီထောင်ချောက် ထဲကနေ အလွတ်ရုန်း ထွက် ပြသွား ပြီ …